Phone Windows u noqday caan ah ka dib markii uu ku bilowday si gaabis ah. Windows media player qabtaan shaqo ee celcelis ahaan video files. Si kastaba ha ahaatee, marka ay timaado ciyaaro nooc kasta oo videos iyo files audio, software ma yimaado ayaa ku dhow inay VLC. Xitaa on Windows mobile madal, VLC media player ka dhigaysa aragti la yaab leh marka ay timaado taageerada saxaafadda.
Haddii aad u bedesheen phone daaqadaha ama aad rabto si loo soo dajiyo ciyaaryahan warbaahinta la isku halayn karo, waayo, aad telefoon, VLC waa kan ugu fiican. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aadan soo dajiyo waa in aad ogaato wax yar oo ku saabsan VLC.
Sida loo soo dejisan iyo rakibi app ku saabsan telefoonka Windows?
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo ay u soo baxdo iyo rakibi ciyaaryahan VLC on boosteejo Windows, laakiin marka ay timaado hab phone Windows oo keliya si loo soo dajiyo waa ka Windows dukaanka. Waa sahlan oo sameeya wax kasta oo aad u. Halkan waa tilmaame fudud in la raaco halka software ah.
Aad app ee aad taleefan ka raadi Windows Store.
Hadda raadiyo VLC aad dukaanka oo ka jaftaa ku yaal.
On shaashadda soo socda, inaad sameyso oo dhan waa qasabadda ku rakib oo aad samaysay.
Your phone Windows si toos ah downloads VLC ku saabsan telefoonka oo ku rakibtay. Waxaad ka heli kartaa VLC in aad App s.
Sidee ku darto files si VLC media player on Windows Phone?
Waxaa ma noqon doonto baahida loo qabo wax ku darto files ama ku darto video ah in ciyaaryahan warbaahinta VLC maadaama ay si toos ah ku darayaa videos in ciyaaryahanka VLC ka dib markii dhowr dhex your computer. Si kastaba ha ahaatee, xataa haddii aadan arkin video ku saabsan telefoonka daaqadaha ka dibna raac tallaabooyinka hoos ku xusan:
Marka hore, waxaad tagtaa Tusiyayaasha, oo sida caadiga ah waa in goobaha ama ugu weyn menu ku xiran tahay nooca aad isticmaalayso.
Hadda falgali meesha uu ka video ku saabsan telefoonka .
Kuwaasi waa tallaabooyin wax fudud oo si sahlan, laakiin inta badan qaab waqtiga aqlka waa arrinta. Si loo hubiyo in ay app baaritaano videos on your app u sii on ama folder videos iyo marnaba u sii qoto dheer hoos dhowr subfolders.
Maxaa dhacaya haddii file video waa aqlka on VLC for Windows Phone?
Waxaa jira faylasha yar ee aan la taageeray on app VLC aad telefoonka sidii VLC ayaa weli koraya version ka xasilloon oo lagu kalsoonaan karo ee telefoonada Windows. Xaaladaha noocaas ah, waxay isticmaalaan Converter ah oo lagu magacaabo Wondershare Video Converter Ultimate , taas oo ay taageertaa qaabab oo dhan oo iyaga ka dhabayso galay qaab la doonayo aad rabto. The Wondershare Ultimate Converter la og yahay in ay caawiyaan badalo oo dhan videos in qaab VLC ah in VLC si fudud u garan karaan. Taas macnaheedu ma aha in aad si ka badan wax laga walwalo aad videos aan ciyaaro! Fiiri Wondershare website-ka rasmiga ah wixii macluumaad dheeraad ah.
> Resource > Windows > Talooyin Isticmaalka VLC on a Phone Windows